Torohevitra 10 ilaina hamoronana tranokala miaraka amin'ny Wordpress | Vaovao momba ny gadget
Torohevitra ilaina 10 hamoronana tranokala miaraka amin'ny WordPress
WordPress dia androany CMS tsara indrindra hamoronana tranokala amin'ny fomba matihanina sy amin'ny fotoana fohy noho ny raha manao fampandrosoana manokana 100% isika. Ny fisafidianana ny wordpress dia tsy ho eo am-pelatanantsika ihany no mpitantana atiny be mpampiasa indrindra eran'izao tontolo izao, fa hanana fidirana amin'ny habetsahan'ny plugins sy lohahevitra malalaka izay mamela anao hampiditra karazana asa rehetra ao amin'ny tranonkalanao amin'ny tsindry tsotra.
Fa na WordPress no safidy mandresy, aza hadino ny iray toro-làlana izany dia hahafahanao misoroka olana amin'ny ho avy ary hanampy betsaka amin'ny fitondrana ny tranokalanao amin'ny fahombiazana. Nanomboka Emibin, orinasa manokana amin'ny serivisy IT matihanina, omeo anay torohevitra tsotra 10 harahina hahomby amin'ny tranokalanao WordPress vaovao:
1 Manakarama serivisy fampiantranoana tsara
2 Ovao ny solonanarana anarana hitantanana ny tranokala
3 Ovao ny URL hahafahanao miditra amin'ny tontonana fitantanana
4 Fero ny fiezahana hiditra amin'ny WordPress anay
5 Mametraka mari-pankasitrahana SSL
6 Fametrahana SEO, lakilen'ny fahombiazana
7 Votoatin'ny kalitao ambonin'ny zavatra rehetra
8 Aza manararaotra ireo teny lakile
9 Fampihenana ny ora fandefasana amin'ny tranokalanay
10 Raha tsy fantatsika izay ataontsika, manakarama matihanina
Manakarama serivisy fampiantranoana tsara
Mila mitandrina ianao rehefa mifidy Hosting, aza mijery ny vidiny fotsiny. Zava-dehibe ny zava-misy any Espana ary haingana ny hafainganam-pandehan'ny tranonkala. Mety ihany koa ny misafidy mpamatsy iray izay manolotra anao ny cPanel na Plesk karazana takelaka hahafahanao misoratra anarana tranokala ary mametraka WordPress amin'ny fomba tsotra.
Ovao ny solonanarana anarana hitantanana ny tranokala
Mila mitandrina isika ary aza avela ny mpampiasa "admin" izay tonga amin'ny alàlan'ny toerana misy anao ary hanova ny anarana ho iray hafa, hataontsika izany amin'ny alàlan'ny fidirana amin'ny tahiry amin'ny alàlan'ny PHPMyAdmin. Toy izany koa, ampiasao lakile izay misy litera, isa ary tandindona lehibe sy kely mba hiarovana antsika amin'ny fanafihana mahery vaika.
Ovao ny URL hahafahanao miditra amin'ny tontonana fitantanana
Misaotra plugin nantsoina SF Move Login Azontsika atao ny mamindra ny fidirana URL mankany amin'ny tontolon'ny fitantanana WordPress amin'ny alàlan'ny URL iray hafa, ka hialana amin'ny fanandramana fidirana na fanafihana DDOS amin'ny tranokalanay.
Fero ny fiezahana hiditra amin'ny WordPress anay
Zava-dehibe ny ferana ihany koa ny isan'ny fanandramana hiditra amin'ny tranokalanay raha toa ka tsy mahomby daholo ireo voalaza etsy ambony ireo. Miaraka amin'ny plugin Ny fiezahana mametra ny fetran'ny WP hialantsika ny fanandramana hiditra amin'ny teny miafina ny isan'ny fotoana tadiavintsika amin'ny alàlan'ny fandraràna ny IP amin'ny toerana nitrangan'ny fanafihana.
Mametraka mari-pankasitrahana SSL
Teboka iray tokony horaisina izany miaraka amin'ireo mari-pankasitrahana ireo ny angon-drakitra rehetra an'ny mpanjifanay dia hivezivezy voaaro miantoka ny tsiambarateloo. Izany dia miteraka fahatokisana bebe kokoa ary noho izany dia mivarotra bebe kokoa. Hanondro ireo mpikaroka fa tranokala azo antoka izy io nefa tsy misy hafatra mandrahona rehefa miditra amin'ny tranonkala. Ity teboka ity dia misy fiatraikany tsara amin'ny SEO satria, eo amin'ny tranonkalan'ny mpifaninana manana ambaratonga mitovy amin'ny antsika dia aleon'ny Google ny tranonkalantsika alohan'ny hafa.
Fametrahana SEO, lakilen'ny fahombiazana
Fantatra avokoa fa ny fametrahana ny organika dia lohahevitra sarotra be izay mety hidika hoe fahombiazana na tsy fahombiazan'ny tranonkala iray ary noho izany ny orinasantsika. Yoast SEO dia napetraka ho ny plugin tsara indrindra natokana ho an'ny SEO amin'ny WordPress ary toy ny iray amin'ireo malaza indrindra. Ny fampiasana ireo fitaovana entiny dia hanampy antsika hanatsara ny firafitry ny tranonkalantsika, amin'izay hampitombo ny fahafahantsika hahita fahombiazana. Misy safidy hafa toa ny SEO iray daholo, saingy mifikitra amin'ny plugin Yoast ho tsara indrindra izahay.
Votoatin'ny kalitao ambonin'ny zavatra rehetra
Elaela i Google fanasaziana atiny ambany kalitao sy miverimberina. Hodorantsika foana ny fandikana ny famaritana na ny ampahany amin'ny lahatsoratra amin'ny pejy hafa satria hisy fiatraikany ratsy amin'ny SEO izany ary hahatonga antsika ho ambany toerana nefa tsy tsikaritray. Misy fitaovana hanamarinana raha nesorina tamin'ny tranokala hafa toa anay ny lahatsoratray Copyscape. Efa nolazain'izy ireo izany, ny votoatiny dia mpanjaka.
Aza manararaotra ireo teny lakile
Taloha ela dia nieritreritra izany mamerina teny lakile ad nauseam amin'ny pejinay dia hanatsara ny fomba SEO ny tranonkalantsika. Tsy misy zavatra hafa lavitra amin'ny zava-misy, amin'ity horonantsary ity, injeniera Google mandà an'io angano io ary manome torolàlana vitsivitsy momba ny fomba hanatonana ilay lohahevitra. Ny tolo-kevitray dia tsy tokony hihoatra ny famerimberenana 5 na 6 satria avy any dia ho very hery ny tenintsika isaky ny famerimberenana fanampiny.
Fampihenana ny ora fandefasana amin'ny tranokalanay
Ary farany teboka iray hafa tena lehibe ary tsy ny fanatsarana ny traikefan'ny mpampiasa ihany fa ny fanatsarana ny toerana misy anay dia ny hafainganam-pandehan'ny tranokalanay. Google manome valisoa ireo tranonkala maivana miaraka amin'ny atiny kalitao sy mila fotoana kely fotsiny izany raha oharina amin'ireo mavesatra kokoa. Plugins toa WP Super Cache o W3 Total Cache Ampio izahay hampihena ny lanjan'ny tranokalanay, hanatsarana ny ora sy ny toerana misy anay.
Raha tsy fantatsika izay ataontsika, manakarama matihanina
Ny zavatra farany tokony hataontsika dia ny fandaniantsika fotoana amin'ny zavatra tsy takatsika na voafehintsika nanomboka teo ny fotoana amin'ny orinasantsika dia vola. Betsaka ny olona manomboka mamorona ny tranonkalany manokana amin'ny fandaniana fotoana be dia be nefa tsy mahazo vokatra. Mety ho sarotra ny mamorona pejy fa sarotra kokoa ny mametraka azy tsara ho an'i Google sy mitazona azy.
Orinasa toa an'i Emibin manolotra a mpiasan'ny manam-pahaizana momba ny famolavolana tranonkala, Fametrahana SEO sy fikojakojana ireo tranonkala izay hanamora ny fiainantsika. Tsy ho very vola izahay amin'ny tsy hahatratrarana valiny mahafa-po amin'ny tranokalanay ary vokatr'izany dia hahatratra tranokala mahomby amin'ny SEO sy ny ambaratonga famolavolana ankehitriny izahay rehefa mahafeno ny fepetra takiana amin'ny Google anio.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny gadget » General » Software » Torohevitra ilaina 10 hamoronana tranokala miaraka amin'ny WordPress
Fiara Uber mizaka tena voarohirohy tamin'ny lozam-pifamoivoizana
GameStop dia hanidy fivarotana mihoatra ny 100 manerantany